GIMP 2.10.24 inosvika ichivandudza chishandiso kujekesa zviitiko | Linux Vakapindwa muropa
GIMP 2.10.24 inosvika ichivandudza matara uye zvimwe zvinhu zvitsva zvisati zvaziviswa
Kana isu tichida kuve ne software yacho nguva dzose kusvika parizvino paLinux, imwe yesarudzo dzakanakisa ndeye kushandisa Flatpak mapakeji. Kugadziridza kunosvika ipapo ipapo, uye kunyange kumberi pane zvaitarisirwa, senge vhezheni yapfuura kubva kune inonyanya kufarirwa yemahara edhirivhari kana yazvino yasvika masikati ano. Muchokwadi, mwedzi mishanu yapfuura uye GIMP 2.10.24 nyowani kukandwa kunze Vakasvika Flathub pamberi pewebhusaiti yepamutemo kana chero chirevo kubva kune vanogadzira.
Nekudaro, pasina chinyorwa chekuburitsa, hatigone kuwedzera runyorwa rwezvitsva izvozvi, kunyangwe isu tichagadzirisa ino chinyorwa kana chaburitswa. Tinogona zvakare kutaura nezvekuvandudzwa kwakaburitswa nemushandisi paTwitter, kusimudzira kunosvika pamatanho uye chishandiso chinogona kushandiswa kuratidza zvinhu uye icho chatinogona kuona mumadhirowa mazhinji, senge iwo emamwe ma comics, atove kushanda pasina matambudziko.
1 Iye zvino yawanikwa paFlathub
2 GIMP 2.10.24 Zvakakosha
Iye zvino yawanikwa paFlathub
SenlinOS inotsanangura kuti «Nongedzo kubvarura izvozvi (GIMP 2.10.24) inoshanda kunze kwetangi. Pasina chinhu ichi, kana nzira iri padhuze nemucheto wetende, haizoputsika«. Izvi zvinoyeuchidza nezve gadziridzo yavakaita mwedzi kana kunyange makore apfuura, kuti kana tikawedzera mumvuri pane chinyorwa uye chakareba kwazvo, iro bhokisi remavara raigona kucheka mumvuri, saka mufananidzo waizotakurwa.
GIMP 2.10.24 Zvakakosha
Yakagadziridzwa rutsigiro rwemhando dzakasiyana, senge BMP, DDS, HEIF, JPEG, PDF, PNG, PSD, PSP, uye TIFF.
Zvigadziriso zvinowedzera, zvichivabvumira kushandiswa kunze kana mukati mavo.
Rutsigiro rwekunze kana kutumira kunze GeoTIFF metadata.
Yakagadziridza mupepeti uye metadata muoni.
Kuvhiya kutsva kutevedzera dzakareba zvisina kunaka mapikicha scan scan.
Tsigiro yekugadzirisa RAW mifananidzo kubva kuRigtable 3.6 kana gare gare.
Mazhinji bug fixes.
GIMP 2.10.24 ndiyo yekupedzisira kugadzirisa yemufananidzo mupepeti uyo anoedza kumira ku Photoshop, chimwe chinhu icho chinowana kanenge mumutengo. Mumaawa mashoma anotevera ivo vanofanirwa kushambadzira chinyorwa chekuburitsa neiyi nedzimwe nhau. Parizvino inogona kutorwa chete kubva kuFlathub kana Yako kodhi, asi munguva pfupi ichave zvakare inogoneka kubva kune yayo website yepamutemo. Tichifunga nezvekuti vashandisi veMacOS vanga vari mu limbo kwenguva yakareba, hatizive kana vachizovandudza vhezheni yeApple desktop desktop system panguva imwe chete.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » GIMP 2.10.24 inosvika ichivandudza matara uye zvimwe zvinhu zvitsva zvisati zvaziviswa
Rocky Linux kutongwa kusunungurwa kwakadzoserwa kupera kwaApril
Anogona here Amazon Alexa virtual mubatsiri kuwedzerwa pane yako distro?